Gịnị Bụ Unboxed Network?
Unboxed – a Oke Market
Ụdị na-emefu ihe karịrị 36 ijeri US dollar na mmadụ mgbasa ozi na mgbasa ozi kwa afọ. A na mgbasa ozi na-emekarị n'oge leghaara na-adịghị tụkwasịrị obi site ndị mmadụ. Ka ọ dịgodị, 9 nke 10 ndị mmadụ obi content posted site onye ha maara. na, bụ ebe Unboxed abịa na. Anyị dakọtara-eme ụdị na-elekọta mmadụ media ọrụ na ike na post authentic ika metụtara ọdịnaya. Ọ na-enyere a ọtụtụ mma njikọ aka, emepụta ezigbo ika onwe na okwu-nke-ọnu mmetụta. Ọ na-enye ndị na-elekọta mmadụ media ọrụ.
A-arụ ọrụ Business
Unboxed bụ a n'ụzọ zuru ezu na-arụ ọrụ technology tinye n'ọrụ site n'elu 100+ ụdị ụwa (onwere na US, Canada, na United Alaeze, Germany, Denmark, Norway na Baltics). N'ime 40,000 e nke koodu, ọtụtụ narị iterations, na ngwaahịa azụ ofụri isua nyeere ụlọ ọrụ na-taa-anapụta nnukwu ọnụ ọgụgụ okwu-nke-ọnu campaignsthat abuana ọtụtụ nde kwa ụbọchị na-elekọta mmadụ media ọrụ.
The zuru okè Cure maka Companies
Unboxed awade zuru okè na-agwọ n'ihi na ụlọ ọrụ na-arịa ọrịa nke na-egbu oge na ego na influencer ahịa ụlọ ọrụ ndị na-adabere na ọrụ kpụ ọkụ n'ọnụ Filiks maka ịchọta nri influencers, negotiating amụọ, na ijikwa mmekọrịta. Ndị a elu aka n'ibu-amachi ọnụ ọgụgụ nke mmadụ mgbasa ozi ndị ọrụ nwere ike itinye aka na okwu-nke-ọnu-mkpọsa na ulo oru na-emekarị ejedebe na-arụ ọrụ na a obere ìgwè nke na-elekọta mmadụ media ọrụ – influencers ma ọ bụ siri.
Unboxed na-Metụtara onye ọ bụla
Anyị chere na n'èzí igbe na bịara na a ngwọta na-enye anyị ohere dochie anya nke a obere ọdọ mmiri nke influencers na ọtụtụ nde ndị everyday mmadụ mgbasa ozi ọrụ – onye anyị na-akpọ Unboxers. Anyị na-eji dochie mkpọsa oru na ahịa ọkachamara onye nwere ike jikwaa ọtụtụ puku manye a decentralized n'ụzọ, site na ijikọta Ai na otu nọọrọ onwe ha na netwọk nke ahịa ọkachamara. na na, anyị nwee na-elekọta mmadụ media ọrụ ka ha òkè nke $ 36bn ahịa.
The Plan of Unboxed
Anyị azụmahịa atọrọ ka na-eto eto si na-arụ ọrụ na 10 mba ugbu na-arụ ọrụ na-elekọta 100 ahịa. Iji mee ngwangwa usoro anyị ga-ewu a otu nke 125 ọkachamara site 2021. GỤKWUO…
kaadị News 18.11.2018
👍 ịmeela & SUBSCRIBE NO...
Hey Altcoin Daily Team, taa ...
👍 ịmeela & Idenye aha + ...
Inye Bitcoin NA kaadị BELO ...
Gaa na anyị website: https://alt ...
altcoinsngọngọ yinyemkpụrụ egoico
Previous Post:Blockchain News 17.07.2018
Next Post:Blockchain News 18.07.2018
altcoin AltCoin Buzz altcoin kwa ụbọchị altcoins bitcoin bitcoin analysis Bitcoin okuku bitcoin okuku n'elu bitcoin ozi ọma bitcoin ozi ọma taa Bitcoin price bitcoin price ibu bitcoin price ozi ọma bitcoin technical analysis bitcoin taa ngọngọ yinye BTC BTC ozi ọma BTC taa cardano kaadị cryptocurrency cryptocurrency ahịa cryptocurrency ozi ọma cryptocurrency trading kaadị ozi decentralized EOS ethereum ethereum analysis ethereum ozi ọma ethereum price esi mee ka ego ịkwụsị etinye bitcoin ịkwụsị kaadị na-bitcoin mere n'iyi litecoin neo ozi ripple n'elu altcoins tron mgbe ịzụta bitcoin xrp
Cryptosoft: Wayo ma ọ bụ oké njọ bot?